‘मर्जर म्यान’ अर्थात् उमेशसिंह भण्डारी
नेपाल राष्ट्र वैंकले केही वर्षदेखि निरन्तर रुपमा वैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक आपसमा गाभ्न (मर्जर गर्न) मा जोड दिइरहेको छ । धेरै वैंक तथा वित्तीय संस्था हुंदा अनुगमन, निरिक्षणमा कठिनाइ भएको र सम्वन्धित संस्थाको वित्तिय अनुशासनमा पनि समस्या भैरहेको राष्ट्र वैंकको मुख्य तर्क रहंदै आएको छ ।
‘मर्जर’ भन्ने वित्तिकै धेरै कुरा आउंछ । मर्जरको सिद्धान्त, संस्थाहरुको पूंजीगत र प्रशासनिक अवस्था, त्यसका सेवाग्राहीहरुको संख्या र अवस्था, लगानीका क्षेत्र आदी, इत्यादी । तर, नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा मर्जर भन्ने वित्तिकै उमेश सिंह भण्डारीको नाम पनि स्वतः जोडिन्छ । कतिपय वैंकरहरु त भण्डारीको नामै परिवर्तन गरिदिएका छन् -मर्जर भण्डारी ।
एसएलसी पछि इन्जिनियर बन्ने सपना बोकेर २००४४ सालमा उदयपुरको गाईघाटबाट काठमाण्डौ छिरेका उमेशकै भनाईमा ‘एक्सिडेण्टली’ वैंकर बनेका हुन्, अन्यथा उनी यतिबेला सरकारको कुनै निकायका ‘इन्जिनियर सा‘प’ वा हाकिम भैसक्ने थिए । त्रिचन्द्र कलेजबाट आईएसस्सी गरेपछि लोकसेवाको तयारी गरिरहेका भण्डारीको आंखा अचनाक गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएको तत्कालिन नेपाल अरब वैंकको एउटा विज्ञापनमा पर्यो, जहां २६ जना सहायक स्तरका कर्मचारी माग गरिएको थियो । र, कर्मचारी छनौट गर्ने विधि र तौर तरिका लोकसेवाको जस्तै हो । ‘अचेल त वैंकहरुमा कर्मचारी छनौट त्यसरी हुंदैन, आफ्नै किसिमले गर्छन् । तर, त्यतिबेला ठवाक्कै लोकसेवाकै शैलीबाट कर्मचारी छनौट गरिएको थियो ।’ भण्डारी स्मरण गर्छन् ।
२६ जना मागिएकोमा १५ सय जनाले फार्म भरेछन् । जेहोस् जागिरको पहिलो प्रयास नै सफल भयो । उमेशले ‘वैंकिङ्ग क्यारिएर’ शुरु गरे । साथसाथै इन्जिनियर बन्ने सपना पनि सधैको लागि समाप्त भयो ।
केही वर्ष त्यहां काम गरेपछि उनी पढ्नको लागि ३ वर्ष विदेश गए । फर्केर आउंदा एभरेष्ट वैंकमा भरखरै पन्जाव नेशनल वैंक साझेदारको रुपमा प्रवेश गरेको थियो । उनले १ वर्षसम्म प्रवन्धक तहमा काम गरे पछि त्यो छोडेर तत्कालिन इण्डोस्वेज (हालको नेपाल इन्भेष्टमेण्ट वैंक) मा शाखा प्रवन्धक बने ।
त्यसको केही समयमा नेपाल वंगलादेश वैंक आर्थिक अवस्थामा अत्यन्तै कमजोर भएको स्थितिमा पुग्यो । राष्ट्र वैंकले तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक (हाल गभर्नर) महा प्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा एउटा टोली वंैक व्यवस्थापनको लागि खटायो । केही महिना काम गरेपछि त्यो टोलीले बासुदेवराम जोशीको नेतृत्वमा रहेको टोलीलाई वंगलादेश वैंकको व्यवस्थापन जिम्मा लगायो । ३ सदस्यिय त्यो टोलीमा उमेश पनि एकजना थिए ।
वंगलादेश वैंकको त्यही व्यवस्थापन पछि नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा उमेशको पहिचान स्थापित हुंदै गयो । समयक्रममा उनी ‘मर्जर म्यान’ र ‘मर्जर सिंह भण्डारी’को रुपमा चिनिन थाले । आर्थिक अवस्थामा अत्यन्तै कमजोर भएको वंगलादेश वैंकलाई सहज गति प्रदान गरेपछि भण्डारीको टोलीले वंगलादेश फाइनान्सलाई वैंकमा ‘मर्ज’ गर्यो । त्यो भन्दा राष्ट्र वैंकको दवावमा एक दुईवटा ‘मर्ज’ का घटना भए पनि दुईवटा संस्थाको व्यवस्थापन नै सहमत भएर ‘मर्ज’ भएको यो नै पहिलो घटना थियो । त्यसको लागि भण्डारीले निकै ठूलो ‘पापड पेल्नु’ परेको थियो । धेरैले उनलाई असफल हुने काम किन गर्नु परेको होला भन्दै हतोत्साहित पनि गरेका थिए । स्वंय राष्ट्र वैंककै अधिकारीहरु पनि विश्वांसमा थिएनन्, तर भण्डारीको टोलीले त्यसलाई सफल बनाएरै छोड्यो । वंगलादेश फाइनान्स वंगलादेश वैंकमा ‘मर्ज’ भए पछि नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा ‘मर्जर’को मुद्धाले वहसको रुप मात्रै लिएन, धमाधम ‘मर्जर’ हुन थाले, जुन अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ ।
वंगलादेश वैंकपछि उमेश नेशनल फाइनान्सको कार्यकारी प्रमुख बने र त्यसलाई नारायणी फाइनान्ससंग ‘मर्ज’ गराए । त्यसक्रममा दुई संस्था गाभ्दा ‘क्यापिटल गेन ट्याक्स’, शेयर खरिद विक्री, कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा केही अन्योल र समस्याहरु थिए । ती समस्याहरु समाधानको लागि आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालिन उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्याल ( हाल नेपाल सरकारका सचिव), नेपाल राष्ट्र वैंकका निर्देशक प्रल्हाद थापा लगायतसंग मिलेर गरेको रातदिनको मेहनतलाई भण्डारी कहिल्यै विर्सिदैनन् । ‘हामीले त्यतिबेला निकै ठूलो कसरत पछि एउटा मान्यता स्थापित गर्यौं र त्यही अनुसार अहिलेसम्म काम भैरहेको छ । त्यतिबेलाको दुखलाई अहिले भैरहेको काम देख्दा सन्तोष लाग्छ’ भण्डारीको भनाइ छ ।
नारायणी नेशनलको मर्जर सफल भएपछि उमेश त्यति बेला अति नै भद्रगोल अवस्थामा रहेको स्ट्याण्डर्ट फाइनान्समा पुगे । अर्वपति व्यापारी उपेन्द्र महतो मुख्य लगानीकर्ता रहेको उक्त फाइनान्सको मुख्य लक्ष्य वाणिज्य वैंक बन्नु थियो, तर आर्थिक परिसूचकहरु अति नै डामाडोल थिए । माछापुच्छ्रे वैंक, वाणिज्य वैंक त थियो, तर त्यो पनि कतिबेला टाट पल्टिन्छ भन्ने अवस्थामा थियो । उमेशले जोखिम मोलेर दुवै संस्थालाई गाभेर आफ माछापुच्छ्रे उप प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बने । ‘दुईवटा कमजोर संस्थालाई मर्ज गर्दा स्थिति झन डामाडोल हुने हो कि भन्ने चिन्ता राष्ट्र वैंककै केही अधिकारीहरुले पनि गर्नु भएको थियो । तर, आंट गरेर मर्ज गरियो र अहिले माछापुच्छ«े वैंक राम्रा वाणिज्य वैंकहरु मध्ये एक भएको छ । मैले गरेको निर्णय गलत थिएन भनेर यसैमा सबैभन्दा सन्तोष लाग्छ ।’ उनी भन्छन् ।
त्यो मर्जर सफल भएपछि उनी अर्काे खराब संस्था काष्ठमण्डप विकासमा प्रमुख कार्यकारी बनेर पुगे । लगानीकर्ताहरुले टाट पल्टिन लागेको भनेर आश मारिसकेको उक्त वैंकमा १४ महिनाको अवधिमा २५ प्रतिशत लाभांश खुवाउन सफल भए । त्यसपछि महाकाली विकास वैंक, कांक्रेविहार विकास वैंक लगायतका वैंकहरुसंग मर्जर गराइयो भने केही समयमै कुमारी वैंकमा काष्टमण्डप डेपलपमेण्ट वैकलाई ‘मर्ज’ गराए । र, उमेश कुमारी वैंकको उप प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बने ।
३ महिना भयो, उनी अहिले कुमारी वैंकको जागिर छोडेर घरमै बसिरहेका छन् । कमजोर वित्तिय संस्थाको नेतृत्व लिने, त्यसको व्यवस्थापन सुधार गरेर बलियो बनाउने र ‘मर्ज’ गराएर त्यसबाट आफूले विदा लिने भण्डारीको इतिहांस नै भैसकेको छ । त्यहि कारण हो- उनलाई चिने जानेका वैंकरहरुले मर्जर सिंह भनदै जिस्क्याउने ।
अहिले घरमै बसिरहेका भण्डारी फेरि त्यस्तै कमजोर संस्थाको नेतृत्व लिएर वैंकिङ्ग क्षेत्रमा फर्किन्छन् वा यो क्षेत्रबाट पलायन हुन्छन् ? धेरै मानिसहरुले उनलाई सोध्न थालेका छन् । जनतापाटीले पनि यही प्रश्न गरेपछि उनी मज्जासंग हांसे । ‘काम गर्दै जांदा कमजोर संस्था लिने र त्यसको व्यवस्थापन सुधार गरेर मर्ज गराउने नियमितता जस्तै भएछ । अब के हुन्छ, थाहा छैन । तर, म वैंकिङ्ग क्षेत्रमै रहने कुरामा भने कुनै शंका छैन’ उनले भने । उनले आफूले जागिरको लागि जागिर भन्दा पनि संस्थागत सुशासन कायम गरेर देश र जनताको लागि थोरै भए पनि योगदान दिने गरि काम गर्ने गरेको र अब पनि त्यही गर्ने बताए ।
नेपाल राष्ट्र वैंकले अहिले पनि ‘मर्ज’ को नीतिमै जोड दिइरहेको छ । नेपालमा सांच्चै नै ‘मर्जर’ जरुरी छ ? यदि छ भने वैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या कति हुनु ठीक हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उमेश त्यो कुरा परिस्थितिले निर्धारण गर्ने बताउंछन् । ‘सबै कुरा परिस्थितिमा भर पर्छ । राष्ट्र वैंकले परिस्थितिलाई नै ख्याल गरेर यस बारेमा नीति ल्याएको हो । त्यसमा हामीले राष्ट्र वैंकलाई यसो गर, उसो गर भनेर भन्नुको कुनै अर्थ रहंदैन । संस्थागत सुशासन मुख्य कुरा हो । जतिवटा संस्था भए पनि संस्थागत सुशासन नभए संस्था टिक्न सक्दैन । त्यसैले मर्जरको कुरा गरिरहंदा संस्थागत सुशासनलाई केन्द्रमा राखिनुपर्छ’ उनको भनाइ छ ।
लिम्बू समुदायको धाननाच लोप हुँदै, संरक्षणमा युवापुस्ताको ध्यान गएन ७ मिनेट पहिले
गोरखामा भूकम्पको धक्का १९ मिनेट पहिले
कोभिडबाट रसियामा एकै दिन एक हजारको मृत्यु, ५० प्रतिशतले लगाएनन् खोप २४ मिनेट पहिले